माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा यी मन्त्रीको अवस्था के हुन्छ ? « Ok Janata Newsportal
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा यी मन्त्रीको अवस्था के हुन्छ ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पूर्ववत नेकपाका दुई पक्ष यतिबेला पार्टी विहीन बनेका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र ओली पक्षमा सिमित छन् । दुवै पक्षले यतिबेला कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कानूनी परामर्श लिइरहेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजै संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका थिए । संसद पुगेका ओली संसद सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली संसद पुगेको समयमा प्रचण्ड–नेपाल सर्वोच्चको फैसलाबारे सिंहदरबारमा कानूनी परामर्शमा थिए ।
आइतबारको संसद त्यसैकारण केही ढिलोगरी सञ्चालन भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि यी दवै पक्षमा अनेकन प्रश्न उठिरहेका छन् । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई मिल्न सक्ने मार्गसहित फैसला सुनाएको छ । नमिलेमा २०७५ साल बैशाखकै रुपमा फर्किनुपर्ने हुन्छ । साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
दुई पक्षमा विभक्त पार्टीका मन्त्रीहरुपनि यतिबेला तनावमा छन् । पूर्व हैसियतमा फर्किएसँगै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्छ । साविकको माओवादी केन्द्रमा नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आफूहरुले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बताइसकेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रभाकरले भनेजस्तै होे भने ओली सरकारमा रहेका साविक माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु फर्किनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् माओवादी केन्द्रबाट ४० प्रतिशत सदस्य संख्या लगेर साविक एमालेमा जानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मन्त्री पद जान्छ । साविक माओवादीमा पनि नफर्किने र मन्त्री पनि रहिरहने विधानले दिदैन ।
माओवादी केन्द्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका मन्त्रीहरु पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका के गर्लान त ? यो प्रश्न उठेको छ । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा र उनीहरु नफर्किएमा उनीहरुको सांसद पद पनि जानेछ । यद्यपि उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफू माओवादी केन्द्रमा नफर्किने बताइसकेका छन् ।
यता, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुलाई पनि त्यस्तै समस्या छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा कसरी जाने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष छलफलमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएका आफू संसदमा पुनः विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन् ।
साविकको माओवादी र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु पनि अब के गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेमा लबिङमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई फकाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपनि, सांसद पद गएपनि मन्त्री बन्ने धेरैबाटा बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।